Qorshaha Gaadiidka Seattle - Transportation | seattle.gov
Waxaan bilownay wareegii koowaad ee wacyigelinta bulshada. Waxaad siyaabo badan u caawin kartaa horumarinta Qorshaha Gaadiidka Seattle!
Booqo habka Qorshaha Gaadiidka ee Seattle Ka qaybgal khadka tooska ah si aad hadda uga qayb qaadato. Waxaad buuxin kartaa sahankayaga cusub, kasoo qayb gal kulankayaga, noona sheegi meelaha aad jeclaan lahayd in isbedel lagu sameeyo.
Iska diiwaangeli iimaylkayaga wixii ku soo kordha
Si wada jir ah, waxaan u dhisi doonaa nidaam gaadiid oo qof walba si fiican ugu shaqeeya. Waxaan rajeyneynaa inaan maqalno fikradahaaga, khibradahaaga, caqabadahaaga, iyo fursadahaaga.
Waxaan rabnaa inaan ogaano:
Markaad ka fikirto mustaqbalka gaadiidka Seattle, maxaad rajaynaysaa inaad aragto? Maxaa muhiim kuu ah?
Markaad dhexmarayso Seattle, waa maxay caqabadaha aad la kulanto? Maxaa kuu sahli kara inaad si fudud u socsocoto?
Waa maxay Qorshaha Gaadiidka Seattle (STP)?
Qorshaha Gaadiidka Seattle (STP) waa sida ay nooga go'an tahay in aan dhisno nidaam gaadiid oo siinaya qof walba helitaan hufan iyo doorashooyin la awoodi karo si uu u gaaro goobo badan iyo fursadooyin fog.
Nidaamkeena gaadiidku waa ka badan yahay wadooyinka iyo laamiyada cagta. Waxay ka kooban tahay basaska, tareenka, laamiyada cagta, meelaha dadweynaha, iyo qaar kale oo badan. Laakiin COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo koritaanka degdega ah ee dadweynaha ayaa ka dhigaya mid adag in nidaamkani uu si habsami leh u socdo. Taasi waa sababta aan rabno inaan abuurno nidaam waara oo shaqeeya hadda iyo mustaqbalka.
Waa maxay sababta STP-du aniga iyo beeshaydaba ​​noo khusayso?
Meel kasta oo aad u socoto - haddii aad shaqo u socoto ama dugsi, saaxiibo aad booqato, hawlo shaqo, aado goobtaada cibaadada, ama aad casho u baxayso - waa inaad awood u yeelatid inaad sidaas u samayso si badbaado leh, hufan, oo la awoodi karo. Guud ahaan, baahida gaadiidkeennu wuxuu sameeyaa nolol maalmeedkeena. Markaad ka qaybqaadato abuurista STP, waxaad naga caawin doontaa inaan dhisno nidaam si fiican ugu shaqeeya qof walba.
Nidaamka gaadiidka Seattle waa inuu ka faa'iidayaa qof walba. Inta badan, marka qorshayaasha dawladda la hawlgeliyo, waxay meesha ka saaraan dad aad u badan - gaar ahaan kuwa madow, kuwa asaliga ah, ama qayb ka mid ah bulshada midabka leh; dadka LGBTQIA+; dadka ku nool faqriga; bulshooyinka soogalootiga ah iyo dadka aan ku hadlin Ingiriisiga guriga; dhalinyarada; dadka waaweyn; iyo dadka naafada ah. Waxaan aaminsanahay in qof walba codkiisa la maqlo si baahidooda loo daboolo.
Si wada jir ah, aan uga jawaabno su'aasha: Maxaad doonaysaa in nidaamkayaga gaadiidku u ekaado?
Aragtida mustaqbalka gaadiidka ee Seattle
Wax ka baro oo ku biir abuurista Qorshaha Gaadiidka Seattle (STP)! Isticmaal boggan si aad ula xidhiidho fursadaha ka-qaybgalka, u hesho ilaha mashruuca, oo aad ula socoto habka qorshaynta.
Hannaanka qorshayntayadu hadda waa bilow, waxaanan u baahanahay caawimadaada!
Si aad nooga caawiso inaan bilowno, noo sheeg sida aad ugu socoto agagaarka Seattle oo na soo ogeysii habka ugu fiican ee aan kula xiriiri karno marka aan si wadajir ah u horumarinayno qorshaha.
Wax badan ka baro Qorshaha Gaadiidka Seattle
Qorshaha Gaadiidka Seattle waa rajoda mustaqbalka gaadiidka ee Seattle. Gacmo-gacanta lagu sameeyay bulshada oo ay hagto qiyamka SDOT- Badbaadada, Sinnaanta, Cimilada, iyo Maamulka -Qorshaha wuxuu dejin doonaa yoolalka, xeeladaha, iyo talooyinka nidaamka gaadiidka ee u shaqeeya magaaladeena hadda iyo mustaqbalka. Waxa aanu rajaynaynaa in aanu kula shaqayno, bulshada, marka aanu abuurayno isku xidhka bulshada ee diirada saaraya tayaynta shabakadayada gaadiidka ee dadka, oo aan ugu horrayn baabuurta.
Waxaan aqoonsanahay in dadaaladii qorshaysneed ee hore in ay ku guul dareysatay in si buuxda looga wada qayb galo qof walba, gaar ahaan Madaw, Asalkii, iyo dadka midabada leh. SDOT waxay la kaashan doontaa ururada bulshada ku salaysan, kuwaas oo xidhiidh hore la leh bulshooyinka ay u adeegaan, si ay u dhegaystaan oo ay u hubiyaan in qorshuhu ka tarjumayo qiyamka iyo baahiyaha qof kasta.
Gonaaanadkiii? Qorshaha Gaadiidka Seattle waa ka go'anaanshaha SDOT ee nidaamka gaadiidka ee sinnaanta isir ahaan iyo bulsho ahaan kaas oo buuxinaya baahiyaha qof kasta si uu noogu xidho dhammaan si badbaado iyo waxtar leh meelaha ugu muhiimsan - Abuurista Isku-xidhka Bulshada.
Wax badan ma iiga sheegi kartaa Qorshaha Gaadiidka Seattle (STP)?
STP waa aragtida mustaqbalka gaadiidka Seattle. Ka-qaybgalka bulshadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah horumarinta qorshaha. STP waxay dejin doontaa hadafyaha, xeeladaha, iyo talooyinka nidaamka gaadiidka ee u shaqeeya magaaladeena hadda iyo mustaqbalka. Qorshuhu wuxuu qaabayn doonaa wax walba laga bilaabo maalgelinta gaadiidka mustaqbalka ilaa mashaariicda iyo barnaamijyada kor u qaadaya habka aan ugu raaxaysanayno goobaha dadweynaha iyo u gudubka magaalada.
Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno adiga iyo deriskaaga si aan u abuurno nidaam gaadiid oo buuxinaya baahiyahaaga.
Inta badan, marka qorshayaasha dawladda la asaasayo, waxay go’aanada ka saaraan dadka - gaar ahaan kuwa madow, kuwa asaliga ah, ama xubnaha bulshada midabka leh; dadka LGBTQIA+; dadka ku nool faqriga; bulshooyinka soogalootiga ah iyo dadka aan ku hadlin Ingiriisiga guriga; dhalinyarada; dadka waaweyn ee waaweyn; iyo dadka naafada ah. Waxaan aaminsanahay in qof walba codkiisa la maqlo si baahidooda loo gaaro. Waxaan la kaashaneynaa ururada bulshada, kuwaas oo xiriir hore la leh bulshooyinka ay u adeegaan, si loo dhageysto oo loo hubiyo in qorshuhu uu ka tarjumayo qiyamka iyo baahida qof kasta.
Gonaaanadkiii? Qorshaha Gaadiidka Seattle waa sida ay nooga go'an tahay dhismaha nidaamka gaadiidka kaas oo:
Buuxiya baahiyaha qof walba,
Waxa uu dhamaanteen nagu xidhaa si badbaado leh, dhakhso ah, oo la awoodi karo meelaha iyo fursadaha, iyo
Wuxuu ula dhaqmaa qof kasta - iyada oo aan loo eegin jinsiyadda, fasalka, jinsiga, dhalashada, da'da, ama kartida - sharaf iyo sinaan.
Goorma ayaa STP la samayn doonaa?
Waxaan filaynaa inaan haysano qorshe qabyo ah oo dib u eegista dadweynaha guga 2023. Waxaad awoodi doontaa inaad dib u eegto, faallo ka bixiso, oo aad ka caawiso qaabaynta qorshaha illaa 2022. Ka hubi boggan wixii ku soo kordha habka
Waxaad sidoo kale iska qori kartaa wixii ku soo kordha iimaylka
Hadda ma ku lug yeelan karaa?
Haa! Waxaan rabnaa inaan horumarino qorshe ka tarjumaya qiyamkaaga, baahiyahaaga, iyo khibradahaaga. Booqo Xarunta Ka-qaybgalka Onlaynka ah si aad u heshid fursado aad kaga qaybgasho.
Maarso 2022: Daahfurka Mashruuca!
Inta lagu jiro bishan, waxaan la wadaagaynaa hadafyadayada, ujeedooyinka, jadwalka, iyo fursadaha ka qaybgalka asxaabta iyo bulshada.
Gu'ga - Dayrta 2022: Qaybta 1 ee ka qaybgalka dadweynaha
Inta lagu jiro marxaladan, waxaan ka shaqayn doonaa si ay u fahmaan mudnaanta bulshada.
Dayrta 2022 - Gu'ga 2023: Qaybta 2 ee ka qaybgalka dadweynaha
Inta lagu jiro marxaladan, waxaan wadaagi doonaa wixii aan maqalnay oo aan baranay inta lagu guda jiray Wajiga 1. Waxaan sidoo kale ka raadin doonaa talooyin dheeraad ah bulshooyinkayada.
Gu'ga 2023: Qaybta 3 ee ka qaybgalka dadweynaha
Waxaan la wadaagi doonaa qabyo qoraalka STP bulshooyinkayada oo aan maqli doono jawaab celintooda.
Xagaaga 2023: dhamaadka STP!
Maxay Seattle hadda ugu baahan tahay qorshahan?
Caqabadaha degdega ah iyo kuwa soo baxaya: Wadajir, waxaan wajahaynaa caqabado gaadiid oo saameeya nidaamkayaga gaadiidka. Tan waxaa ka mid ah:
Saamaynta joogtada ah ee masiibada COVID-19 u timid hab-nololeedyada bulshada iyo habka aan u socdaalno,
Xaalada degdega ah ee cimilada oo keenaysa xaalado cimilo oo aad u xun oo saameeya wadooyinkeena,
Kobaca dadweynaha ee kordhiya socodka oo muujiya baahida loo qabo in la dhiso guryo la awoodi karo oo u dhow gaadiidka dadweynaha,
Kuwani waxay muujinayaan tallaabo degdeg ah. Waa in aan abuurnaa nidaam gaadiid oo cusub oo ka jawaabaya caqabadahan oo na ka caawinaya dadwaynaha si ay qof kasta si ammaan ah, hufan, oo la awoodi karo ugu safro magaalada Seattle.
Horumarinta xirmo cusub oo maalgelinta gaadiidka: Xidhmada deeq-lacageedkayaga hadda, Levy to Move Seattle, wuxuu dhacayaa 2024. Levy to Move Seattle waxa ay bixisaa $930 milyan muddo sagaal sano ah (2015-2024) waxayna bixisaa qiyaastii 30% lacagta loo qoondeeyey gaadiidkayada. Waxaan u baahanahay inaan horumarino xirmo cusub oo maalgelin ah taasoo ku saleysan jawaab celintaada. Anaga oo adeegsanyano Caawintaada si aad u abuurto STP, waxaan horumarin karnaa xirmada maalgelinta ee soo socota taasoo wax ka qaban doonta baahiyahaaga
La jaanqaadida Cusboonaysiinta Qorshaha Guud ee Seattle: Cusboonaysiinta Qorshaha Guud ee Seattle (Prehensive Plan) waa aalad ay waaxyaha Magaaladu adeegsadaan marka ay samaynayaan go'aanno muuqaal ah oo ku saabsan sida Seattle u korto oo u horumarto labaatanka sano ee soo socda. Waxyaabo kale oo badan oo ay ka mid yihiin, Qorshaha Guud waxa ku jira qayb gaadiid ah. Qorshaha Guud waa la cusboonaysiinayaa isla markaana waa aanu horumarinayna Qorshaha Gaadiidka Seattle. Tani waa muhiim sababtoo ah Qorshaha Gaadiidka Seattle wuxuu siin doonaa caddayn weyn bulshada si ay u helaan tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan sida hadafyada iyo siyaasadaha Qorshaha Guud ay ugu dhex muuqan doonaan nidaamka gaadiidka.
Waa maxay qiyamka keenaya qorshahan?
STP waxay muujin doonta muhiimadayada Qorshuhu wuxuu sidoo kale diiradda saari doonaa cimilada, sinnaanta, mas'uuliyadda, iyo baahiyaha badbaadada si aan gacan uga geysanno wax ka qabashada caqabadahayada ugu adag.
Muhiimada SDOT & hadafyada:
Sinnaanta: Waxaan aaminsanahay in gaadiidku uu wax ka qaban doono baahiyaha bulshooyinka midabka leh iyo kuwa dhammaan dakhliga, kartida, iyo da'da. Hadafkayagu waa inaan iskaashi la samayno bulshooyinka si aan u dhisno nidaam gaadiid oo siman jinsiyad ahaan iyo bulsho ahaanba.
Badbaadada: Waxaan aaminsanahay in qof kastaa awood u leeyahay inuu si badbaado leh ugu socdo magaalada oo dhan. Hadafkayagu waa inaan abuurno deegaan gaadiid oo badbaado leh oo aan meesha ka saarno shilalka halista ah iyo kuwa dilaaga ah ee ka dhex dhaca magaalada Seattle.
Dhaqdhaqaaqa: Waxaan aaminsanahay in doorashooyinka gaadiidku ay muhiim u yihiin helitaanka fursadaha. Hadafkayagu waa inaan dhisno, shaqayno, oo aan ilaalino nidaamka gaadiidka la heli karo kaas oo si la isku hallayn karo ugu xidha dadka, meelaha, iyo alaabta.
Joogteynta: Waxaan aaminsanahay in caafimaadka deegaanka lagu horumariyo jiilalka mustaqbalka iyada oo loo marayo gaadiid waara. Hadafkayagu waa inaan wax ka qabanno dhibaatada cimilada iyada oo loo marayo nidaam gaadiid oo waara, adkaysi leh.
Nolosha: Waxaan aaminsanahay in gaadiidku uu muhiim u yahay taageerada nolol maalmeedka. Hadafkayagu waa inaan u maareyno jidadkeena iyo laamiyadayada si loo kobciyo nolosha bulshada korna loogu qaado caafimaadka bulshada.
Heer sare: Waxaan aaminsanahay in aan dhaafsiisno filashada bulshooyinka aan u adeegno. Hadafkayagu waa inaan dhisno koox ay ka go'an tahay heer sare oo u qalabaysan xirfadaha si ay uga gudbaan caqabadaha maanta iyo berrito.
Seattle waxay leedahay qorshayaal badan. Maxaynu ugu baahanahay qorshe cusub? Maxay samayn doontaa si ka duwan?
Qorshaynta guud: STP waxa ay wax uga qaban doontaa dhaqdhaqaaqa, gelista, iyo baahiyaha goobta dad waynaha oo ku jira hal dukumeenti ahaan sidii nidaam midaysan. Qorshuhu waxa uu cusboonaysiin doonaa dadka lugaynaya, baaskiilka, gaadiidka iyo xamuulka ee jira si aanu wax uga qabano baahideena hadda iyo mustaqbalkaba. STP waxay ku dari doontaa dhowr hindise oo magaalada ah sida Seattle's Vision Zero, Race iyo Justice Initiative, Qorshe Hawleedka Cimilada, Qorshaha Korontada Gaadiidka, iyo kuwa kale. ntaa waxaa dheer, waxay tixraaci doontaa qorshayaasha ay abuureen wakaaladaha gaadiidka gobolka si aan u aragno xeeladaha sida ugu wanaagsan ugu adeegi doona Seattle.
Habka is dhexgalka iyo hufnaanta: STP-gu waxa uu kaa caawinayaa fursadaha dhaqdhaqaaqa (sida baaskiil wadida, socodka, qaadashada gaadiidka, iyo in ka badan) si ay u wada shaqeeyaan si ay kuugu taageeraan helitaanka fursadaha, dadka, iyo meelaha.
Ka-qaybgalka bulshada: Waxaan samaynaynaa daah-furnaan, ka-qaybgal loo dhan yahay oo ah mudnaantayada STP. Waxaan isticmaali doonaa habab cusub si aan kuugu fududeyno adiga iyo deriskaaga inaad ka qaybqaadataan.
Sidee bay bulshadu uga qayb qaadan doontaa habka qorshaynta?
Adiga ayaa haga: STP waxa hagi doona adiga – bulshooyinkeena. Codadkaagu waxay kaa caawin doonaan qaabaynta qorshaha. Waanu dhagaysan doonaa oo aanu ka jawaabi doonaa fikradahaaga marka aanu ka shaqaynayno inaanu wax ka qabano caqabadahayaga gaadiidka ee ugu wayn annagoo leh aragti cusub oo magaaladeena ah.
Diirada saar dadka dhaqan ahaan laga tagay habka qorshaynta: Waxaanu la xidhiidhi doonaa dadka Seattle oo dhan si aanu u qaabaynno nidaamka gaadiidka mustaqbalka, annagoo diirada saarayna dadka inta badan laga tago habka qorshaynta Tan waxaa ku jira kuwa madow, asal ahaan, ama qayb ka mid ah bulshada midabka leh; dadka LGBTQIA+; dadka ku nool faqriga; bulshooyinka soogalootiga ah iyo dadka aan ku hadlin Ingiriisiga guriga; dhalinyarada; dadka waaweyn ee iyo dadka naafada ah.
Dhismaha awooda kuwa ugu dhow bulshada: Waxaan la kaashaneynaa ururada bulshada ku saleysan iyo Waaxda Xaafadaha Seattle Xiriirinta Bulshada si aan u horumarino hanaan ka-qaybgal oo dhisa shuraakada bulshooyinkayada, u sahlaysa qof walba inuu ka qaybqaato, oo dhisno aasaaska sinnaanta jinsiyadeed.
Xeeladaha ka-qaybgalka cusub: Habka ka-qaybgalka STP, waxaan ku dadaalaynaa inaan u fududeyno dadka inay uga qaybgalaan sinnaan isir ahaan iyo caddaalad ah. Waxaan ka maqli doonaa codad badan, hubin doona in bulshooyinka inta badan laga saaray ay ku lug leeyihiin, oo aan ka caawino dadka inay dareemaan inay ka qaybgalkooda muhiim tahay. Waxaanu sidaas ku samayn doonaa annagoo adeegsanayna xeelado dhaqan-kuxiran, la heli karo, oo loo dhan yahay oo mudnaanta siiya caafimaadka bulshada inta lagu jiro masiibada socota ee COVID-19.
Codkaagu wuxuu noqon doonaa qaybta ugu muhiimsan ee geedi socodkan, waxaana rajeyneynaa inaan idinkala shaqeyno adiga iyo deriskaaga si aan u horumarino qorshe u shaqeeya Seattle oo dhan.
Sidee STP ugu xidhmaysaa Cusboonaysiinta Qorshaha Guud ee Seattle?
Cusboonaysiinta Qorshaha Guud ee Seattle - One Seattle Plan - ayaa hagi doonta go'aamo muhim ah oo ku saabsan sida Seattle u korto una horumarto labaatanka sano ee soo socda.
Waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa Xafiiska Qorsheynta iyo Horumarinta bulshada (OPCD) si loo horumariyo labada qorshe isku mar. Si wada jir ah, STP iyo One Seattle Plan ayaa wax ka qaban doona mustaqbalka baahiyaha guriyaha, shaqooyinka, iyo maalgashiga bulshada.
Booqo shabakada OPCD's One Seattle Plan si aad wax badan uga ogato oo ula wadaagto fikradaada si aad u hagto mustaqbalka muuqaalka weyn ee Seattle.
Waa maxay habka dib u eegista deegaanka ee Qorshaha Gaadiidka Seattle?
STP waxay mari doontaa nidaamka dib u eegista sharciga siyaasada deegaanka ee Gobolka (SEPA). SEPA waxay hubisaa in qiyamka deegaanka si fiican loo tixgeliyo inta lagu jiro qorshaynta iyo geedi socodka go'aan qaadashada.
Baadhista EPA 30-maalmood Muddada Faallooyinka - Juun 16-July 16, 2022: Xakamaynta waxay siisaa fursad ay bulshadu kula wadaagto SDOT wixii ku saabsan waxa lagu dari doono Bayaanka Saamaynta Deegaanka.
Qabyo Qoraalka Saamaynta Deegaanka (EIS) Siideynta iyo 30-ka maalmood ee Faallooyinka - Horraanta 2023: Marka qabyo qoraalka EIS la sii daayo, bulshada waxaa lagu martiqaadayaa inay wadaagaan faallooyinka. Faallooyinkaan waxaa lagu daray EIS-da kama dambaysta ah, oo ay la socdaan jawaabaha.
EIS kama dambays ah waxaa La daabacaya - Bartamaha 2023: EIS kama dambaysta ah waxaa loo isticmaali doonaa in lagu wargeliyo habka go'aan gaarista.
Hel wararka Mashruucas
Isdiiwaangeli si aad u hesho wararka iimaylka ah ee ku saabsan Qorshaha Gaadiidka Seattle.